Enye yezinjabulo empilweni yobuthakathaka obuthakathaka yizicathulo. Ngomunye ukhetho lombhangqwana olandelayo lungcono ekusetshenzisweni kwansuku zonke, futhi kumuntu kuyisipho sokubheka imfashini. Ingabe kufanelekile ukukhumbuza ukuthi imilenze engaphansi nemadolo yizingxenye eziqhelile zomilenze? Amabhuzu afana nawo awakhangele.
Ezweni lanamuhla kunzima ukucabanga owesifazane ogama lakhe lesigqoko lingenalo izimbatho eziningana zezicathulo nezitayela ezahlukene: amabhoti amahhafu noma amabhuzu, amabhuzu esithendeni esincane noma ngaphandle kwesithende ... Kodwa kanjani enye? Owesifazane othakazelisayo kufanele abe izesekeli ezikhethiwe kahle nezicathulo.
Ukubonakala kwezitayela ezintsha kwenzeka ngokufaka izakhi zokuhlobisa ezindaweni ezikhona kakade. Phakathi kwama-fashionistas okudingekayo, amabhuzu asebenzayo ngesitayela sama-cowboys aseMelika, aqondiswa "entshonalanga", ephethe i-niche ekhethekile kumaqoqo abadwebi befashini abahamba phambili. Izimpande zomlando wokukhiqiza kwazo ziya emathafeni aseNyakatho Melika yekhulu le-19, futhi, ngokusho kweminye imibono, kubanqotshwa abaseSpain bekhulu le-17. Amabhuzu okugibela ayengakwazisa kuphela ama-cowboys aseMelika, kodwa futhi nabagibeli abavela eMongolia baya eHungary. Futhi lokhu kuyaqondakala, okusebenzayo kuphakeme njalo (isikhwama esincane sikuvumela ukuba ufake i-boot esihlahleni, futhi isithende esincane esingaphakathi sangaphakathi sisiza ukulungisa umlenze)! ERussia lesi sitayela sezinyawo sabonakala kuPetru I ngekhulu le-18. Futhi izibhuzu ze-cowboy zangaphambili zazihloselwe amasosha, kodwa ekugcineni zakwazi ukunqoba izinhliziyo zabesifazane.
Ama-boots ngesitayela sama-cowboys aseMelika amakhulu emakhulu amane axinile ngokuqinile izikhundla zawo empilweni yabesifazane futhi aqhubeke nokuphakamisa intshisekelo kwinhlanganisela yobuhle nenduduzo. Abadabukisi, abadala ama-cowboys, abachitha isikhathi esiningi sokugibela isikhathi sabo, bakwazi ukuhlanganisa zonke izimfanelo ezinhle kakhulu zezicathulo, okubaluleke kakhulu namuhla. Ngezinga lezwe elinamandla, abesifazane kudingeka bahlale yonke indawo futhi ngesikhathi esifanayo banakekele abesilisa obuhlukile. Lokhu akunakwenziwa ngaphandle kokuhamba okuthakazelisayo nokuthakazelisayo. Ukunethezeka nokulula ukuhamba ngokuqondile kuxhomeke ezicathulweni ezikhethiwe. Abacwaningi abaningi bathi izicathulo umuntu angatshela okuningi mayelana nezici zobuntu, ukuthanda, izithakazelo, ingcebo yomnikazi. Akumangalisi ukuthi kukhona umbono: ufuna ukushintsha wena - shintsha izicathulo zakho! Abaklami bezin fashion zanamuhla bayaqonda futhi banelise isifiso sowesifazane ukuthenga izicathulo ezikhululekile, ubuhle, ukunikeza ubuhle nobuhle, kodwa futhi ukuthi uhlukile kulowo osebenza nabo ehhovisi. Abaqambi bagcizelela ubuhle bemilenze yabesifazane benza i-vagaries yabesifazane, bedlala ngombala, ukuhlobisa, ukuthungwa kwendwangu, ukuhlanganisa ngokuvumelana namafomu asendabuko kanye nama-accents amahle. Futhi ngisho nokufudumala okubandayo ngaphambi kwenduduzo yenduduzo nobudlova. Lokhu bathi amabhuzu ngesitayela sama-cowboys aseMelika akuyona nje edlule eyithakazelisayo, kodwa futhi ikusasa elithembisayo.
Ngokwezintandokazi ngesitayela sama-cowboys aseMelika, kugcizelela ubuhle bezinyawo, akulula ukukhetha izingubo ngisho nezikhathi ezibucayi kakhulu ekuphileni. Ukuhlanganiswa kwabo nezesekeli ezifana nekhwama, ibhande ngethoni yesigatshana se "entshonalanga" kuzokwenza umnikazi wayo abe mnandi, alondoloze isitayela nokungaqiniseki, futhi anikeze lula nokusebenza. Abesifazane baseNtshonalanga isakhiwo se-propag liber freedom, amandla, ukuzethemba, ukukhululeka, intshisekelo kanye nobulili obukhethekile. Laba besifazane abazi ukuthi bafunani futhi baphumelela empilweni ngesinyathelo esiqinile, eqinile! Uhlobo luni lomuntu oluzokushiya olungenandaba? .. Wonke umuntu ufuna ukubuka, ngaleyo ndlela ethinta amahle ... Futhi ngokungaqondile umusho uvela kumuntu oyintandokazi k / f "Uthando lweHhovisi": Yizicathulo ezenza owesifazane abe ngowesifazane ...
Khetha izicathulo ngaphandle kokulimaza empilweni
Pizza nge-asparagusi no-anyanisi
I-Potato casserole ngenyama kanye noshizi
Imbukiso yefesti e-London Underground
Sandwich nge ushizi, ham kanye nephayinaphu
I-ice cream ye-ayisikhilimu ene-raspberries nama-blackberries
Indlela yokwenza imfashini futhi enhle
Ubuhlobo bokufihla phakathi kwabantu
I-spring rolls ne inkukhu namakhowe
Chick Cute: umhlobiso ezenziwe of uzizwa for imbali imbiza